अन्तर्वार्ता Archives - Page6of6- Paschimnepal.com
Sep202016 by Paschim NepalNo Comments
सुर्खेतमा के भने निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. यादवले (भिडियोसहित)
प्रकाशित मितिः मङ्लबार, अशोज ४, २०७३ |
सरकारले आगामी चैत्र महिना भित्र स्थानीय तहको निर्वाचन जसरी गर्ने उद्घोष यसअघि नै गरेको छ । तर निर्वाचन मिति घोषणा हालसम्म पनि गर्न सकेको छैन् । मिति मात्र नभएर निर्वाचन गर्न केही कानुन निर्माण गर्नु पर्ने हुन्छ । ति कानुन पनि हालसम्म निर्माण गरिएको छैन् र यसतर्फ सरकार तथा राजनीतिक दलहरुले साझा धारणा बनाउन सकेका छैनन् । यही अवस्थामा २०७४ सालको माघसम्म तीन तहका निर्वाचन गर्न सम्भव छ त ? जिल्ला निर्व
‘दशैँ तिहार लक्षित विशेष सुरक्षा योजना’ दशैँ, तिहार र छठ नेपालीका तीन ठुला चाड हुन् । यी चाड मनाउन अधिकाँश नेपालीहरु भारतबाट घर फर्किनछन् । सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका हिमाल, पहाड र तराईका जिल्लाका नेपालीहरु रोजगारीका लागि भारत जाने गर्छन् । तर दशैँ, तिहार नजिकीदैँ गर्दा नेपालीहरु नेपाल–भारत सीमामा पर्ने मुख्य नाका कञ्चनपुरको गड्डाचौकीबाट भित्रने गर्दछन् । दुःखले कमाएको रकम लिए
मध्यपश्चिम नेपालको पर्यटकीय सम्भावना भएर पनी ओझेलमा परेको क्षेत्र हो । मध्यपश्चिमा नेपालको सबैभन्दा ठुलो ताल रारा ताल, गहिरो ताल फोकसुण्डो ताल, हिन्दुहरुको पवित्र तिर्थ स्थल मानसरोबर जाने प्रवेशद्धार हुम्ला लगाएतका विविध पर्यटकीय स्थल भएको क्षेत्र हो । तर पनी यस्को उचित प्रचार प्रसारका साथै राज्यले पनी ध्यान दिन सकेको छैन । विगत १२ वर्ष देखी सुर्खेतको पर्यटन क्षेत्रमा लागेका पर्यटन व्यवसायी तथ
मैले यस्लाई नन्दलाल बैश्य एक्लैको यो जितका रुपमा लिएको छैन् । सबै व्यवसायीको जित हो । गोपाल प्रसाद अधिकारी र कपिल प्रसाद अधिकारी पराजित भएको होइ्न दोस्रो र तेस्रो स्थान आउनुभएको हो । तीनवटा चुनावी घोषणा पत्र अव एक भइसके । सदस्यता शुल्क घटाएर आर्थिक वर्षमै संघमा सदस्यता सङ्ख्या बढाएर ६ हजार पु¥याइने छ । म एक्लैले व्यवसायीक मुद्दा सफल हुन सक्दैनन् भन्नेमा म पूर्णरुपमा विश्वस्त छु । सबैको सहयोग
कांग्रेस, माओवादी र मोर्चाको विनाशकारी गठबन्धन
राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक तथा एमाले सांसद लालबाबु यादवले कांग्रेस, माओवादी र मधेसी मोर्चाको पछिल्लो सत्ता गठबन्धनलाई विनाशकारी गठबन्धनको संज्ञा दिए । राजनीति शास्त्रका ज्ञाता उनले ‘ माकियाभेलियन पोलिटिक्स’को विशेषता वताउँदै यस्तो राजनीतिमा बाबु मारे पनि हुने, साथी मारे पनि हुने, जनता मारे पनि हुने तर सत्तामा जसरी पनि पुग्नु पर्ने परिभाषा लगाए । मधेस केन्द्रित दल आन्दोलन विसर्जन गरी सत्ता राजनी
एमालेले प्रधानमन्त्रीमा उम्मेदवारी किन दिएन ? प्रधानमन्त्रीमा उम्मेदवारी नदिएर विपक्षमा मतदान गर्ने र जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने निर्णय हामीले गरेका हौँ । हिजो एउटा गठबन्धनका कारण बहुमतमा थियौँ, तर आज हामीसँग बहुमत छैन् । पहिलो त यस्तो अवस्थामा उम्मेदवारी दिनुभन्दा हाम्रो एजेण्डा जनतामाझ लैजानुपर्छ भन्ने ठान्यौँ । दोस्रो, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्नु हुँदैन भनेर राजनीतिक रुपमा व
साउनको महिनामा प्रायः नेपाली महिलाहरु हरियो बन्न रुचाउँछन् । हरियो चुरा, हरियै कपडा अनि हातभरी मेहेन्दी । नेपाली कलाकारहरुले साउन महिना कसरी मनाउँछन् भन्ने विषयमा नेपालपाटीले विभिन्न कलाकारहरुसँग ‘साउन सम्वाद’ गरेको छ । यसै क्रममा मोडल तथा गायिका रमिता भण्डारीसँग गरिएको सम्वाद । साउन कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ ? गणेश भगवान र महादेव भगवानलाई एकदमै मान्छु । प्रत्येक दिन पूजा गर्छु । यसपालीको साउनमा
वि. सं. २०६७ मा स्थापना भएको मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले विज्ञान, शिक्षा, मानविकी, व्यवस्थापन र इञ्जिनीयरिङ गरी पाँचओटा सङ्काय सञ्चालन गर्दैै आएको छ । कुल २ हजार ५ सयजना अध्ययनरत सो विश्वविद्यालयले सुर्खेतका पाँच ओटा आङ्गिक क्याम्पसमार्फत अध्ययन–अध्यापन गराउँदै आएको छ । मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय (मपवि) को इञ्जिनीयरिङ सङ्कायले हाइड्रोपावर इञ्जिनीयरिङ विषयको अध्यापन यसै वर्षदेखि गराउने तया
लोकमानबारे सभामुखले संसद्मा बहस चलाउनुपर्छ : विष्ट
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद गगन थापाले डा. गोविन्द केसीले उठाएका मागलाई आधार मानेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तसहितको विषयलाई छलफल गराउनुपर्ने भन्दै व्यवस्थापिका–संसद्मा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । संवैधानिक प्रमुखको आचरण, पदीय मर्यादा र जवाफदेहिताबारे धेरै प्रश्न उठेपछि सो प्रस्ताव दर्ता गराएको थापाको भनाइ छ । उनै थापासँग संसद् र संवैधानिक प्र